သင့်ကလေးက ဘယ်လိုနို့စို့သူလဲ - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း » ကလေးအာဟာရ » သင့်ကလေးက ဘယ်လိုနို့စို့သူလဲ
နို့စို့ခြင်းဟာမိခင်ရောကလေးပါ အတူတကွဆောင်ရွက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ နို့စို့နေစဉ်ပြုမူသမျှ ကလေးရဲ့အပြုအမူတိုင်းကိုကြည့်ပြီး မွေးကင်းစလေးတွေကို နို့စို့တဲ့ပုံစံအမျိုးမျိုးခွဲနိုင်တယ်။ သီအိုရီတွေအရတော့ Yale တက္ကသိုလ်ရဲ့လတ်တလောလေ့လာမှုတွေအရ ကလေးတွေရဲ့ နို့စို့ပုံစံ ၅ မျိုးခွဲနိုင်ပါတယ်။ the Barracuda, the Excited-Ineffective, the Procrastinator, the Gourmet, the Rester တို့ဖြစ်တယ်။
အားမာန်အပြည့်နဲ့ကလေးငယ် (The Barracuda)
အချိန်ကြာကြီး(မိနစ် ၂၀ ခန့်) အားနဲ့မာန်နဲ့နို့သောက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်သားသားလေး သို့ မီးမီးလေးဟာ barracuda အမျိုးအစားပဲဖြစ်တယ်။ ထိုပုံစံက ကလေးအတွက်လည်း ထိခိုက်စရာမရှိသလို သင့်အတွက်လည်း အချိန်ကုန်သက်သာစေမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ထိုကဲ့သို့ ဆက်တိုက် အချိန်ကြာနို့စို့ခြင်းက မိခင်ရင်သားကိုနာကျင်မှုတော့ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ နို့သီးခေါင်းထိခိုက်ခြင်း၊ အနာတရဖြစ်ခြင်းတွေ ကာကွယ်ဖို့ကတော့ မိခင်က ကလေးငယ်ကိုပုံစံမှန်နဲ့ နို့စို့စေဖို့ အနေအထားပြင်ပေးရမှာဖြစ်တယ်။ ရင်သားရောင်ရမ်းလာပြီဆိုရင် နို့စို့နေတဲ့ပုံစံပြင်ရတော့မှာဖြစ်တယ်၊ ကလေးငယ်ကိုညင်သာစွာ ဂရုတစိုက်ဖယ်ပြီး အော်မယ်၊ ငိုမယ်ဆိုရင်တော့ ချိုလိမ် သို့ သင့်လက်သန်းလေးကိုခဏအစားပေးထားနိုင်ပါတယ်။
ဆန္ဒရှိသလောက်မဖြစ်မြောက်သူ (The Excited-Ineffective)
သင့်ကလေးငယ်က သူနို့စို့ရတော့မှာကိုသိရင် အလွန်ကိုပျော်ရွှင်စိတ်လှုပ်ရှားနေပေမယ့် တကယ်နို့ရည်ရအောင်မသောက်တတ်ဘူးဆိုရင်တော့ အမျိုးအစားလို့ပြောရတော့မှာပါပဲ။ ထိုအချိန်ဆိုရင်တော့ မကြာခင်မှာ မကျေမနပ် စိတ်ရှုပ်ထွေးစွာ အော်ဟစ်ငိုယိုခြင်းတွေလိုက်လာတော့မှာအမှန်ပါပဲ။ ထိုကဲ့သို့ဖြစ်လာရင်တော့ ကလေးကိုအရင်ချော့ပါ၊ ပြီးမှ သူတို့နိုးလာတဲ့အချိန်မှာနို့တိုက်ပါ၊ ဒါဆိုရင်နို့စို့ရဖို့စောင့်နေရင်း စိတ်လှုပ်ရှားနေမယ့်အချိန်တိုသွားပါလိမ့်မယ်။
လေးလေးပင်ပင်သမား (The Procrastinator)
ထိုအမျိုးအစားကတော့ နို့တိုက်ရအခက်ဆုံးလို့ပြောကြပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့အမူအကျင့်ရှိတဲ့ကလေးလေးတွေကတော့ အများအားဖြင့်နို့စို့ဖို့ပျင်းနေ၊ ငိုက်နေတတ်တယ် ဒါမှမဟုတ် နို့စို့ရင်းငိုက်မြည်းနေတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုကလေးမျိုးကိုတော့ လုံလောက်တဲ့အရေးကြီးအာဟာရတွေပုံမှန်ရနေဖို့ သေချာသတိထားနေရပါမယ်။ နို့စို့ဖို့အကျင့်ဖြစ်နေစေဖို့ နို့စို့ချိန်မဟုတ်ရင်တော့မှ သင့်ရင်သားနားမကြာခဏ ပုံမှန်ထားပေးရမယ်။ ဒါ့အပြင် အရမ်းအိပ်လွန်းနေရင် နှိုးဖို့လည်းလိုပါလိမ့်မယ်။
ဒီလိုကလေးမျိုးကတော့ မေမေတို့ရဲ့ရင်သားနဲ့ဆော့ရတာနှစ်ခြိုက်ပြီး တကယ်နို့ရည်စသောက်ဖို့အချိန်ကြာတဲ့အမျိုးအစားဖြစ်တယ်။ ဒီလိုဆိုပြီးတော့လည်း သူ့ကိုနို့စို့ဖို့ အတင်းတိုက်တွန်းလို့မရပါဘူး၊ စိတ်တိုသွားတတ်ပါတယ်။ ထိုအခြေအနေမျိုးဆိုရင်တော့ မိခင်ဟာစိတ်ရှည်စွာစောင့်ရပါလိမ့်မယ်။ သင့်ကလေးငယ်ကိုခဏလောက်ပျော်ပျော်ကြီးဆော့ပါစေ။
နောက်ဆုံးအမျိုးအစားကတော့နားလိုက်၊ သောက်လိုက် အမျိုးအစားဖြစ်တယ်။ နို့စို့နေစဉ်မှာမိနစ်ပိုင်းသာစို့ပြီး ခဏရပ်သွားကာ ပြီးမှပြန်သောက်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တချို့ကလေးတွေဆိုရင် နို့စို့နေစဉ်အိပ်ပျော်သွားပြီးမှ ခဏအကြာပြန်နိုးလာကာ ပြန်လည်သောက်သုံးတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ ထိုအမျိုးအစားဆိုရင်တော့ ကလေးနို့သောက်ချိန်သတ်မှတ်ထားဖို့ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် အဖြေကတော့စိတ်ရှည်ဖို့ပါပဲ၊ အချိန်ကြာလာပါက ဒီထက်ပိုမြန်လာပါလိမ့်မယ်။
မိခင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ မိမိကလေးငယ်ရဲ့ နို့သောက်သုံးမှုအမူအကျင့်ကိုနားလည်ထားခြင်းက သူတို့နို့စို့ခြင်းကိုကိုင်တွယ်ရလွယ်ကူစေသလို၊ သူတို့အမူအကျင့်ကိုလည်းသိရလွယ်လာစေပါတယ်။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဇွန် 1, 2018 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဇူလိုင် 17, 2018
Nurseries. https://www.childcare.co.uk/find/Nurseries. Accessed November 16, 2016.
What Newborn Nursing Personality is Your Infant?. http://www.the-essential-infant-resource-for-moms.com/Newborn-Nursing.html. Accessed November 16, 2016.
What's Your Baby's Nursing Style?. http://www.parenting.com/article/your-babys-nursing-style. Accessed November 16, 2016.